/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Cortexolone 17a-propionate ntụ ntụ
Rating: SKU: 19608-29-8. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
Usoro Molecular: C24H34O5
Molekụla arọ: 402.52
Mmadụ iri asaa na asaa nwere ihu anụ ahụ gbara 2-3 dịka nchọpụta Investigator's Global Assessment (IGA) si nweta usoro ude (n = 15), ma ọ bụ Cortexolone 17a-propionate 1% cream (n = 30), ma ọ bụ tretinoin 0 · 05 % ude (n = 32) otu ugboro n’ụbọchị mgbe ị na-ehi ụra ruo izu asatọ. A na-enyocha nrụpụta ahụike na izu 8 ọ bụla gụnyere ngụkọta ọnya ngụkọta (TLC), ọnya ọnya na-egbu egbu (ILC), acne severity index (ASI) na IGA. Nnyocha nchebe gụnyere akara mgbakasị ahụ nke obodo, ule ụlọ nyocha, nyocha anụ ahụ, ihe ịrịba ama dị mkpa na ndekọ nke ihe omume ọjọọ.
Cortexolone 17a-proprionate, Breezula ntụ ntụ na ụdị polymorphic ya: ezinụlọ mbụ patent, na-agwụ na United States na 2022/23 na na 2022 na ụwa ndị ọzọ, na-ekpuchi ọgwụgwọ nke ogige ahụ maka ọgwụgwọ nke otutu, alopecia na ọrịa ndị ọzọ; ezinụlọ nke abụọ na-ekpuchi ụdị niile a maara nke ọma nke API, ihe mejupụtara nwere otu API yana iji ọgwụ metụtara ya na ịgwọ ọrịa okike, AGA na ọrịa ndị ọzọ: etinyerela patent patent a na United States, Europe, Canada, Japan na mba ndị ọzọ, ga-agwụ na 2030 na United States na 2028 na ụwa ndị ọzọ.Breezula ntụ ntụ